20kw-660kw Deutz အင်ဂျင် Generator ကို ပေးသွင်း,ထုတ်လုပ်သူ - Fmwpower.com
Deutz မီးစက်တစ်စုံ Deutz ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။
ပါဝါစ Range: 660kw မှ 20kw
အဆိုပါ ၏အင်ဂျင်ကို Deutz မီးစက် တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်းဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ် မူရင်း Deutz အားလပ်ချိန်မှာနှင့်နည်းပညာနှစ်ခုဖက်စပ်စက်ရုံများသည်။ ၏အသုံးပြုသူများသည် Deutz မီးစက်တစ်စုံ စွမ်းဆောင်ရည်, အရွယ်အစားအတွက်ကြောင့်အ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုကြောင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် ဒီဇယ်မီးစက်အပေါ်လည်းဂျာမဏီရဲ့အရည်အသွေးများ၏အကြောင်းပြချက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ ဒါပေမယ့်အလွန်စျေးနှုန်းကိုက်ညီ။ ၏တနျခိုးအကွာအဝေး Deutz genset နေ 20kw အထိ 660kw ။
1. Deutz အင်ဂျင် Generator ကိုပင်မ Specification
2. Deutz Generator ကို Se t ကို
လွန်ခဲ့သော : 50kw-800kw ရှန်ဟိုင်းအင်ဂျင်မီးစက်
နောက်တစ်ခု : 50kw-660kw doosan အင်ဂျင်မီးစက်
ဘာသာရပ် : 20kw-660kw Deutz အင်ဂျင် Generator ကို